Ukulala ebusuku kukhanya isibani esincane sasebusuku, kuyalimaza ingane?
Ngezikhathi ezithile, kubikwa kwi-Intanethi ukuthi ukudla ukudla okungu-XX kungaholela ekuthombaneni kusenesikhathi, okwenza wonke umzali akhathazeke ngokudla kwezingane zakhe. Manje, abanye abantu bathi amalambu amancane asebusuku angenza futhi izingane nezingane zikhule ngaphambi kwesikhathi, okwenza omama bakhathazeke kakhulu. A ...
Lezi zinto eziyisishiyagalombili zasekhishini kufanele zishintshwe minyaka yonke!
1) Isipuni selayisi esenziwe ngokhuni noma isipuni - kulula ukuzala amabhaktheriya 2) Ifosholo lepulasitiki noma elenziwe ngokhuni - yize kulula ukuyisebenzisa kepha kulula ukufuya amabhaktheriya 4) Isisuli se-wiper akufanele sihlukaniswe kuphela ...
Amathiphu Okunakekelwa Kwezilwane
Abanikazi abaningi bezilwane ezifuywayo, ngaphandle kolwazi lochwepheshe ngokunakekelwa kwezilwane, bavame ukulahlekelwa lapho izinja zabo zigula. Ukugwema lesi simo, abanikazi bezinja kufanele bafunde okuthile ngokunakekelwa kwezinja zabo lapho zigula, ukuze banakekele inja yethu ethandekayo futhi baqinisekise nokukhula kwayo okunempilo ...
Uyemukelwa ukusivakashela ku-126th Canton Fair!
Uyemukelwa ukusivakashela kumusho olandelayo we-126th Canton fair 2, kusuka ngo-Okthoba 23 kuya ku-Okthoba 24, idokodo lethu elingu-No. 16.4 K16. Silinde wena!
Funda Mayelana Cindezela Ukubumba
Cindezela ukubumba: okusetshenziselwa ukubumba ipulasitiki ye-thermosetting, ngokuya ngezimpawu zokwenza izinto nezinto zokucubungula nobuchwepheshe, ukucindezela ukubumba kungahlukaniswa ekubumbeni nasekuhlobiseni. 1.Ukulolonga Ukubumbana kokuminyaniswa, okwaziwa nangokuthi i-compression molding, yiyona met ...
Funda Nge-Calendering (ishidi, ifilimu)
I-Calendering: inqubo lapho impahla yepulasitiki ixhunywe kwifilimu noma ishidi ngochungechunge lwama-roller afudumele ngaphansi kwesenzo sokukhishwa nokwandiswa. Izici zenqubo: Izinzuzo: ikhwalithi yomkhiqizo omuhle, umthamo omkhulu wokukhiqiza, ungenziwa ngokuzenzakalelayo ukukhiqizwa okuqhubekayo; Okumbi: i-e enkulu ...
Funda Nge-extrusion Molding (iphrofayili)
I-extrusion molding: eyaziwa nangokuthi i-extrusion molding, efaneleke kakhulu ekubunjweni kwe-thermoplastic, nayo efanelekile engxenyeni yokugeleza kokubumba okuhle kwe-thermosetting nokuqinisa kwepulasitiki. okudingekayo ...
Funda Mayelana neBlow Molding
Blow udini: iwukuba extrude impahla oncibilikisiwe thermoplastic kusukela extruder, ngocingo kube isikhunta, bese nishaye umoya entweni, impahla oncibilikisiwe luyanda ngaphansi isenzo ingcindezi yomoya, kufaneleka odongeni isikhunta umgodi, futhi ekugcineni Ukupholisa nokwelashwa kokudingekayo ...
PU ethenga isikhwama , isikhwama sokuthenga, white PU shopping bag , pink PU ethenga isikhwama , isikhwama sansuku zonke, grey PU shopping bag ,